Imoto yokulethwa kwe-DHL
I-DHL International GmbH ( DL )  iyisithunywa samazwe ngamazwe, ukulethwa kwamaphakheji kanye nesevisi yeposi ecacile, okuyingxenye yefemu yezokuthutha yaseJalimane i- Deutsche Post.Le nkampani iletha amaphasela angaphezu kwezigidigidi eziyi-1.5 ngonyaka.
Le nkampani yasungulwa eSan Francisco, e-USA, ngo-1969 futhi yandisa insizakalo yayo emhlabeni wonke ngasekupheleni kwawo-1970.Ngo-1979, ngaphansi kwegama le-DHL Air Cargo, inkampani yangena eziqhingini zaseHawaii ngesevisi yezimpahla eziphakathi kweziqhingi isebenzisa izindiza ezimbili ze-DC-3 kanye ne-DC-6 ezine.U-Adrian Dalsey kanye no- Larry Hillblom bengamele mathupha imisebenzi yansuku zonke kwaze kwaba yilapho ukuqothuka kwayo ekugcineni kuvala iminyango ngo-1983.Esiqongweni sayo, i-DHL Air Cargo iqashe abasebenzi abangaphezu kwekhulu, abaphathi nabashayeli bezindiza.
Le nkampani yayinentshisekelo enkulu ekulethweni kwamazwe aphesheya nolwandle, kodwa impumelelo ye- FedEx yabangela ukunwetshwa kwabo kwangaphakathi kwe-US kusukela ngo-1983.
Ngo-1998, iDeutsche Post yaqala ukuthola amasheya ku-DHL. Ifinyelele inzalo yokulawula ngo-2001, futhi yathola wonke amasheya asele ngo-December 2002.Inkampani yabe isingenisa i-DHL esigabeni sayo se-Express, ngenkathi inweba ukusetshenziswa komkhiqizo we-DHL kwezinye izigaba ze-Deutsche Post, amayunithi ebhizinisi, nezinkampani ezingaphansi kwayo.Namuhla, i-DHL Express yabelana ngohlobo lwayo lwe-DHL namayunithi ebhizinisi afana ne- DHL Global Forwarding kanye ne- DHL Supply Chain.Yathola ukusimama e-United States lapho ithola i- Airborne Express .
Imiphumela yezezimali ye-DHL Express ishicilelwe embikweni wonyaka we-Deutsche Post AG.Ngo-2016, imali engenayo yalolu phiko inyuke ngo-2.7% yaya ku-€14 billion.Imali engenayo ngaphambi kwenzalo nezintela (EBIT) ikhuphuke ngo-11.3% ngo-2015 yaya ku-€1.5 billion.
Inkampani engaphansi kwe-DHL yendabuko e- Steinfurt (eJalimane) yabelana ngezakhiwo kanye nempahla ne-Deutsche Post
Isikebhe se-DHL e- Amsterdam, sithwele amabhayisikili okulethwa kwe-DHL esikebheni
Ukukhangisa kwe-DHL kusitimela esilula iTren de la Costa , eBuenos Aires
Iloli le-semitrailer ye-DHL
↑ DHL is an acronym for Dalsey, Hillblom and Lynn, the surnames of the original company's founders.
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=DHL&oldid=94287" تان ورتل
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-13 uLwezi 2021, nge-17:48.